महिनामा कति कमाउछन नेपालका चर्चित युट्युबरहरु ? - Himali Patrika
हिमाली पत्रिका ३० फाल्गुन २०७६, 10:52 am
युट्युवर शिशिर भण्डारीको च्यानल पनि युट्युवमा राम्रो कमाइ गर्ने च्यानल हो। भण्डारी युट्युव हेर्ने नेपाली दर्शकमाझ समस्यामा परेकाहरुको उद्धारको रुपमा समेत परिचित छन्। उनले विभिन्न समस्या परेका सर्वसाधारणको बारेमा बनाएको भिडियोबाट प्रभावित भई देशविदेशमा बस्ने नेपालीहरुले सहयोग रकम पठाउने गर्छन् र त्यसरी जम्मा भएको रकम पीडितसम्म पु-याउने माध्यम भण्डारी बनिरहेका छन्। सोसियल ब्लेडका अनुसार उनको च्यानले मासिक ६० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको छ शिसन बानियाँ पनि चर्चित नेपाली युट्युवर हुन्। उनले युट्युवमा उच्च क्वालिटीको भिडियो अपलोड गर्दै आइरहेका छन्। सोसियल ब्लेडका अनुसार बानियाँको च्यानलको मासिक आम्दानी कम्तीमा ६० हजारदेखि १० लाखसम्म हुन्छ।
आम्दानीसँगै प्रसिद्धि पनि धेरै युट्युवरहरुको फ्यान फलोइंग निकै राम्रो रहेको छ। हिजोआज बरु टेलिभिजनका प्रस्तोताहरुलाई आम मानिसले नचिन्लान् तर धेरै युट्युवरहरुको अनुहार अहिले दर्शकमाझ स्थापित बनेको छ। उत्सव रसाइली, भाग्य न्यौपाने, शिसन बानियाँ, सबिन कार्की, आयुष रिमाललगायतका युट्युवरहरुले अहिले युट्युवबाटै सार्वजनिक परिचय बनाउन सफल भएका छन्। विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा पुग्दा सेल्फी लिने, तपाईको कार्यक्रम नियमित हेर्ने गर्छु जस्ता प्रतिक्रिया पाउने गरेको उत्सवले बताए।
चुनौती र दुःख पनि उस्तै युट्युवमा भिडियो हालेर पैसा कमाउन सोचेजस्तो सहज नभएको भट्टराई बताउँछन््। नियमित र अरुभन्दा फरक कन्टेन्ट हाले मात्रै भ्यूज जाने उनले बताए। युट्युवले समय समयमा आफ्नो नियममा गर्ने परिवर्तनले पनि तनाव दिने गरेको उत्सव बताउँछन्। उत्सव भन्छन्, ‘कतिबेला के नियम आउँछ थाहै हुँदैन।’
कसरी आउँछ युट्युवमा पैसा ? युट्युवमा भिडियो हालेर पैसा कमाउने हो भने सुरुमा च्यानल मोनेटाइज भएको हुनु पर्छ। च्यानल मोनेटाइज हुनका लागि केही मापदण्ड छन्। च्यानल मोनेटाइज हुन सबैभन्दा पहिला च्यानलमा १ हजार सब्सक्राइबर पुगेको हुनु पर्छ। त्यसपछि च्यानलमा ४ हजार घण्टा वाच टाइम पनि पुगेको हुनु पर्छ। यति भएपछि मात्रै आफ्नो च्यानल मोनिटाइज गर्न सकिनेछ। सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी च्यानल मोनिटाइज भएपछि मात्रै युट्युवमा अपलोड गरिएको भिडियोले पैसा कमाउन सक्छ। मोनेटाइजेसन भएको च्यानलमा अपलोड गरिएको भिडियोमा युट्युवले विज्ञापन राख्छ। त्यसरी राखिएको विज्ञापनहरुबाट नै हो पैसा कमाउने।
कति पैसा कमाउँछ भिडियोले ? युट्युवमा हालिएको भिडियोले पैसा कमाउने विषय धेरै कुरामा निर्भर रहेको छ। पैसा कति कमाउने भन्ने मुख्य गरी दुई कुरामा निर्भर रहेको छ। भिडियोहरुको प्रकार र विज्ञापनहरुको मूल्यले भिडियोले के कति पैसा कमाउँछ भन्ने निर्धारण गर्दछ। नेपालबाट अपलोड गरेको भिडियोहरुको ट्रेण्ड हेर्दा ५ लाख भ्यूज भएको एउटा भिडियोले करिब ५ सय डलर कमाएको देखिन्छ।
ठूला कम्पनीका लागि अनाकर्षक युट्युब पछिल्लो समय नेपाली गीतसंगीतमा अडियो क्यासेट तथा सिडीको बजार ठप्प छ। क्यासेट तथा सिडी बजारबाट विस्थापित बनेपछि संगीतमा आबद्ध गायकगायिका तथा संगीत कम्पनीहरु युट्युब, आइट्युन, गाना, साउन्ड्स लगायतका डिजिटल प्लेटफर्ममा आश्रित भएका छन्। यस्ता विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममध्ये नेपालीले सर्वाधिक हेर्ने युट्युब हो। अहिले हरेक म्युजिक कम्पनी तथा गायकगायिकाले आफ्नै युट्युब च्यानल बनाएका छन्। र, तिनै च्यानलमार्फत गीतको भिडियो तथा फिल्महरु युट्युबमा अपलोड गर्ने गरेका छन्।